ပေါ်တူဂီနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ပေါ်တူဂီရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကို
အကောင်းဆုံး ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အေးဂျင့် နှင့်ရှေ့နေများ ပေါ်တူဂီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားပေါ်တူဂီရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်မှု၊ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ , ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း, ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသား၊ ပေါ်တူဂီရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပေါ်တူဂီတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပေါ်တူဂီတွင်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ဒုတိယပတ်စ်ပို့စနစ်၊ ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာ၊ ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာ၊ ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ပေါ်တူဂီတွင်ဒုတိယရွှေဗီဇာ၊ ပေါ်တူဂီတွင်ဒုတိယမြောက်ဗီဇာအစီအစဉ်၊ ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာ၊ ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်, ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ပေါ်တူဂီတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 350,000
ပေါ်တူဂီသည်၎င်း၏ပုံမှန်အတိုင်းဘဝ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်လက်ရှိအခြေအနေများကြောင့်များစွာတန်ဖိုးထားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းနွေးထွေးပြီးအကျိုးပြုသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးယခင်သုံးနိုင်ငံများအတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေရာများအဖြစ်တည်ရှိနေသောအဓိကနိုင်ငံ ၃ နိုင်ငံ၌မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတကာ Expat Insider စစ်တမ်းသည်ပေါ်တူဂီအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျေနပ်မှုရရန်ပထမနေရာတွင်ထားခဲ့သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများသည်ရာသီဥတုနှင့် ၀ န်းကျင်၏သဘောသဘာဝကိုအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ရာသီဥတုနှင့်လေထုကိုလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိခြင်းကြောင့်ပေါ်တူဂီကိုရွေးချယ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏အချိန်ကာလနှင့်အချိန်ကာလသည်သင်၏မူရင်းနိုင်ငံနှင့်ခြားနားနိုင်သည်။ ကြိုတင်ဘွတ်ကင်များထက်နောက်ကျရန်ပေါ်လွင်ခြင်းကို၎င်းကိုအလေးမထားသည့်အရာအဖြစ်မရှုမြင်ပါ။ ပါတီများကိုအချိန်ကာလတစ်ခုအထိမဟုတ်ဘဲ 'ညနေခင်း' တွင်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အခါသမယတစ်ခုသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွက်မိနစ် ၃၀ ကျော်နောက်ကျ။ အပြေးလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းတွင်၎င်းတို့အားပြောပြရန်သင့်အိမ်ရှင်နှင့်ဆက်သွယ်ထားကြောင်းသတိပြုပါ။ သူတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုနားလည်ရန်မည်သို့ကြိုးစားမည်ကိုဂရုပြုရန်ကြိုးစားပါ။
၂၄ နာရီနာရီအားဖြင့်အချိန်ကိုပုံမှန်ထားလေ့ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်စုရုံးမှုများသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကိုကြိုတင်မှာယူသောအခါယင်းကိုသတိရပါ။ ပေါ်တူဂီလူမျိုးများသည်မိသားစုနှင့်အလွန်အမင်းခိုင်မာသောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဤအချက်သည်အထူးသဖြင့်လူငယ်များတွင်အသက် ၂၀ ကျော်သည်အထိ၊ အသက် ၃၀ ကျော်များရှိသူများနှင့်အတူအသက်တာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်။ ၎င်းသည်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်နိုင်သော်လည်းမိခင်၏ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောအဝတ်အစားများသည်လန်းဆန်းစေသည်ဟုမကြာခဏကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ အမှန်မှာပေါ်တူဂီမိသားစုယူနစ်များသည်သမားရိုးကျဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်စုဝေးမှုနှင့်လူမှုရေးပွဲများတွင်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းအပါအ ၀ င်အိမ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအလုပ်အများစုကိုလုပ်လိမ့်မည်။
ပေါ်တူဂီယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်ခြင်းသည်သင်၏လူမျိုးသစ်နှင့်နေရာတစ်ခုရှာရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ပေါ်တူဂီမိသားစုများသည် visitors ည့်သည်များကိုလက်ခံခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ အပန်းဖြေသူများသည်သူတို့၏မြို့ပြဒေသများသို့မဟုတ်မြို့များသို့လည်ပတ်သောအခါသူတို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိုကြသည်။ လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်ပေါ်တူဂီရှိစည်းဝေးကြီးများကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းတို့အတွက်အထူးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်၏အိမ်သို့ကြိုဆိုသောအခါ၊ ဥပမာအားဖြင့်စပျစ်ဝိုင်၊ ပန်းပွင့်များသို့မဟုတ်ချိုသောအရာအချို့ကိုအနည်းငယ်ယူဆောင်လာရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ညစာစားရန်သင့်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပါကတိုင်းပြည်အတွင်းရှိအချိန်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားခြင်းများရှိပါစေ၊ အချိန်ဇယားအတိုင်းပြရန်ကြိုးစားပါ။ ပေါ်တူဂီ၌ညစာကို ၇ နာရီမှ ၈ နာရီထိပုံမှန်ညစာစားပြီးညနေ ၁၂ နာရီမှ ၃ နာရီအကြားနေ့လည်စာစားသည်။
အမှန်မှာပေါ်တူဂီလူမျိုးများသည်သူတို့၏လွတ်လပ်မှုအတွက်ဂုဏ်ပြုကြသည်။ သင်သည်သူတို့ကိုအကျိုးပြုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ အနီးအနားရှိဒေသသုံးစကားအချို့ကိုဖိတ်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းသည်ဒေသခံများနှင့်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ပေါ်တူဂီရှိအခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်နေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည့်နိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းအပေါ်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။
မြို့ကြီးကြီး၏ထင်ရှားသောနေရာတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကွန်ဒိုတစ်ခုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၌ရေးသားချိန်၏အချိန်တွင်ယူရို ၁,၁၂၃ အောက်ဖြင့် ၀ င်ရောက်လာသည်။ ယင်းသည်သတ်မှတ်ထားသည့် ၀ င်ငွေရှိသူများအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်လူနေမှုစရိတ်သက်သာစေရန်လုံလောက်သည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်အတွက်ပရီမီယံငွေပေးချေရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ သို့သော်ပေါ်တူဂီသည်ဥရောပရှိအခြားတန်ဖိုးရှိဒေသများမှထင်ရှားသည်။ ဤဆွဲဆောင်မှုများကြောင့်ပေါ်တူဂီသည်လူငယ်အဆင့်မြင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအားကမ္ဘာပေါ်တွင်ကန့်ကွက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
အဆက်အသွယ်အားလုံးကနေလွတ်မြောက်ပြီးအဆင့်မြင့်ခရီးသွားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘဝကိုဆက်ပြီးရှင်သန်လိုချင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမှာပေါ်တူဂီကသင်လိုအပ်တာအားလုံးကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကျိုးနွံသောအဆင်ပြေမှု၊ ကောင်းမွန်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၊ များပြားလှသောပူးပေါင်းနေရာများနှင့်ကွန်ပြူတာကွန်ယက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကြောင့်နှစ်ထောင်ချီခြင်းအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်၏ယခင်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီသည်ထင်ရှားသောလှိုင်းစီးသမားများ၏ကောင်းကင်ဘုံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အနေအထားကြောင့်မြောက်၊ အနောက်နှင့်တောင်တို့ရောင်ရမ်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာယခုနှစ်၏ကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလှိုင်းများရှိသည်။
ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
ပေါ်တူဂီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
တစ်နှစ်လျှင်7မှ 14 ရက်
ပေါ်တူဂီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency သွားရန်အဘယ်ကြောင့်
ပေါ်တူဂီသည်လူကြိုက်များသောခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များ၊ ပထမတန်းစားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောပုဂ္ဂလိကနှင့်ကော်ပိုရိတ်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် Schengen ဇုန်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်။ ရွှေနေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်သည်ဥရောပ၌လက်ရှိအမြန်ဆုံးနှင့်ဈေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှောက်ထားသူနှင့်မိသားစု ၀ င်များအား Schengen ဇုန်အတွင်းဗီဇာကင်းလွတ်စွာသွားလာခွင့်ပြုသည်။
မိသားစုပေါင်းစည်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်ရင်းနှီးသောမိသားစုဝင်များအားပေါ်တူဂီနေထိုင်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုသည်။ အနီးကပ်မိသားစု ၀ င်များသည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုသို့မဟုတ်လက်တွဲဖော်၊ အသက်မပြည့်သေးသောကလေးများ၊ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်မှီခိုသောကလေးများဖြစ်သည်။ သူတို့ကလက်မထပ်ဘဲပေါ်တူဂီတွင်ပညာသင်ရန်စီစဉ်ထားပါက၊ သင်နှင့်ဇနီး၏မှီခိုနေသောမိဘများဖြစ်သည်။ အခြားဆွေမျိုးများသည်ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။
လူနေအိမ်တစ်ခုစီ၏သက်တမ်းနှင့်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင်အနည်းဆုံးယူရို ၁၂၀၀၀ ဝင်ငွေနှင့်ကလေးတစ် ဦး စီအတွက်ယူရို ၆၀၀၀ ၀ င်ငွေအထောက်အထားကိုတင်ပြပါလိမ့်မည်။
Residency ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအစီအစဉ်သည် ၂-၅ လခန့်ကြာမြင့်သောကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပါကယာယီနေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ကို ၁ နှစ်တရားဝင်ခွင့်ပြုသည်။ ၂ နှစ်စီအတွက်၊ ၎င်းကိုနှစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ ၅ နှစ်နေထိုင်ပြီးနောက်တွင်လျှောက်ထားသူသည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းအတွက်ထုတ်ပေးခွင့်ရှိသည်။ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် ၁ နှစ်ပြီးနောက်လျှောက်ထားသူသည်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်။
လျှောက်လွှာတင်သည့်ကာလတွင်ပေါ်တူဂီသို့နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးပါကပေါ်တူဂီတွင်နေထိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တစ်ခုတည်းသောဝယ်လိုအားမှာပထမနှစ်တွင်နိုင်ငံ၌ ၇ ရက်နှင့်နောက်နှစ်နှစ်အတွင်း ၁၄ ရက်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ပေါ်တူဂီနေထိုင်ခွင့်ရရှိရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းလမ်းခြောက်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သည်အိမ်ခြံမြေများကိုအနည်းဆုံးယူရို ၅၀၀၀၀၀ ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်၊ ပေါ်တူဂီဘဏ်အကောင့်တစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပြုလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးယူရို ၁ သန်းအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ပေါ်တူဂီတွင်အနည်းဆုံးအလုပ် ၁၀ ခုဖန်တီးနိုင်သည်၊ အနည်းဆုံး EUR ကိုလှူဒါန်းနိုင်သည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက် 500000, အနုပညာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းခြင်းများအတွက်အနည်းဆုံး EUR 1 လှူဒါန်းမည်, သို့မဟုတ်သုတေသနလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အနည်းဆုံး EUR 10 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပြင်အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအတွက်တရား ၀ င်ယူရို ၂၀၀၀၀ နှင့်မိသားစုဝင်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ယူရို ၄၀၀၀ လိုအပ်သည်။
ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ပေါ်တူဂီအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်ပေါ်တူဂီရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုပေါ်တူဂီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ပေါ်တူဂီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံတွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပေါ်တူဂီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ပေါ်တူဂီမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ပေါ်တူဂီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပေါ်တူဂီမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ပေါ်တူဂီသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ပေါ်တူဂီရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ပေါ်တူဂီအတွက်, ငါတို့တတ်နိုင်မှတဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ပေါ်တူဂီအတွက်, ပေါ်တူဂီအတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, ပေါ်တူဂီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်ပေါ်တူဂီများအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
ပေါ်တူဂီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာ။
ပေါ်တူဂီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ပေါ်တူဂီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ပေါ်တူဂီမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ပေါ်တူဂီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ပေါ်တူဂီမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ပေါ်တူဂီမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ပေါ်တူဂီရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ပေါ်တူဂီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်သူတို့နေထိုင်ရာအတွက်သူတို့ပြုလုပ်ခဲ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှထွက်ခွာသွားမည်ကိုရှုမြင်သည်။ ပေါ်တူဂီရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ပေါ်တူဂီရှိကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိစေသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ပေါ်တူဂီ Residency
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်ပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ပေါ်တူဂီ၏ Residence Permit ရရှိရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန ဦး Due Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
ပေါ်တူဂီအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်ပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့ရှေ့ဆက်သွားရန်အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် Apostille ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
ပေါ်တူဂီရှိအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများက Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ပေါ်တူဂီမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ပေါ်တူဂီ၌နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပေါ်တူဂီမှသို့မဟုတ်ပေါ်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်းထောက်လှမ်းခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ပေါ်တူဂီရှိတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ပေါ်တူဂီအတွက် ပေါ်တူဂီရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ပေါ်တူဂီရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ပေါ်တူဂီအတွက်အထောက်အပံ့သည်ပေါ်တူဂီအတွက်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ပေါ်တူဂီ၌သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ပေါ်တူဂီအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ပေါ်တူဂီအတွက် ပေါ်တူဂီရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ပေါ်တူဂီ ပေါ်တူဂီရှိအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီအတွက်ရှေ့ရပျ ပေါ်တူဂီရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမပံ့ပိုးပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ပေါ်တူဂီနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ ပေါ်တူဂီအာဏာပိုင်များမှလျှောက်ထားမှုကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။
ပေါ်တူဂီ၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံများဖြင့်နိုင်ငံတကာ Residency ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ပေါ်တူဂီအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုပေါ်တူဂီသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတွင် Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်။
ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့ရွက်များနှင့်ပေါ်တူဂီအတွက်တရား ၀ င်အေးဂျင့်များမှ ၀ န်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောအတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
ပေါ်တူဂီအတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီး, ငါတို့အကြီးတန်းအသင်းအဖွဲ့ဝင်ပေါ်တူဂီအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောက်ခံမှုများအတွက်ရှိလိမ့်မည်
ပေါ်တူဂီအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီသည်။
အကယ်၍ သင်၏ Residency ပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ပေါ်တူဂီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်
ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏အသက်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ပေါ်တူဂီအတွက် ၀ ယ်ယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ပေါ်တူဂီအတွက်
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါ်တူဂီအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ သင်ပေါ်တူဂီတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့် Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါ်တူဂီတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ပေါ်တူဂီနှင့်အခြား ၁၀၆ နိုင်ငံတို့ကိုတစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်ပေါ်တူဂီအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ခုအောက်တွင်သင်မတွေ့ပါ။
မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီစေရန်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ပေါ်တူဂီနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏လမ်းကိုထောက်ခံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ပေါ်တူဂီ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ပေါ်တူဂီတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ပေါ်တူဂီသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ပေါ်တူဂီအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ပေါ်တူဂီရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ပေါ်တူဂီအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ပေါ်တူဂီအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ပေါ်တူဂီရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် ပေါ်တူဂီကိုသင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင် ပေါ်တူဂီရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ပေါ်တူဂီအတွက်လက်ငင်းစတင်ဘို့။
ပေါ်တူဂီအတွက် HR န်ဆောင်မှု
ကျွန်တော်တို့၏ ပေါ်တူဂီအတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ပေါ်တူဂီအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ပေါ်တူဂီအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ပေါ်တူဂီအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ပေါ်တူဂီများအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ပေါ်တူဂီအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ပေါ်တူဂီ၌ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ပေါ်တူဂီအတွက် Setup ကိုစီးပွားရေး
ပေါ်တူဂီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပေါ်တူဂီ.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်
ပေါ်တူဂီ၌ Web ဒီဇိုင်း
ပေါ်တူဂီ၌ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ပေါ်တူဂီအတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ပေါ်တူဂီအတွက် App Development
ပေါ်တူဂီအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ပေါ်တူဂီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပေါ်တူဂီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီပေါ်တူဂီတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ပေါ်တူဂီတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရရှိပြီးပေါ်တူဂီ၌နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency ဖြင့်ပေါ်တူဂီအတွက်ရှေ့နေသည်သင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ပေါ်တူဂီသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်ပေါ်တူဂီသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ပေါ်တူဂီတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကပေါ်တူဂီ၏ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ပေါ်တူဂီ၏ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ဒလင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ပေါ်တူဂီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှနေထိုင်ခွင့်
ပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုပေါ်တူဂီ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုရရှိနိုင်သည်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှု၊ ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်မှုမှတဆင့်ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၊ ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှကူညီခြင်း ပေါ်တူဂီ၌တည်၏။
ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
ပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပေါ်တူဂီနိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပေါ်တူဂီနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နိုင်ငံသားခံယူထားမှု၊ ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်။ ပေါ်တူဂီရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ပေါ်တူဂီရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ
ပေါ်တူဂီအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု ပေါ်တူဂီအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ | ပေါ်တူဂီတွင်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ပေါ်တူဂီမှစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ပေါ်တူဂီအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေး | ပေါ်တူဂီအတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏တရား ၀ င်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသည်။ ပေါ်တူဂီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ပေါ်တူဂီအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပေါ်တူဂီရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
ပေါ်တူဂီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု | ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ပေါ်တူဂီအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပေါ်တူဂီ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပေါ်တူဂီသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ ပေါ်တူဂီအတွက်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်လျှောက်ထားခြင်း ပေါ်တူဂီအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပေါ်တူဂီရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ပေါ်တူဂီရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ပေါ်တူဂီအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ပေါ်တူဂီရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပေါ်တူဂီရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
ပေါ်တူဂီအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ပေါ်တူဂီရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ပေါ်တူဂီအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ပေါ်တူဂီ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၃၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ပေါ်တူဂီအတွက် Residency အတွက်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်, ပေါ်တူဂီရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ပေါ်တူဂီမှအေးဂျင့်များသည်ပေါ်တူဂီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုထောက်ပံ့သည်။
ပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးဆောင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များစွာကိုလည်းပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ သီရိလင်္ကာမှပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှပေါ်တူဂီသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ယူအေအီးမှပေါ်တူဂီမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ပေါ်တူဂီအတွက်
ပေါ်တူဂီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
TAP - ပေါ်တူဂီလေကြောင်းလိုင်း
Camões - ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့်ဘာသာစကားအင်စတီကျု
ပေါ်တူဂီ notary အသင်း
အလုပ်အကိုင်နှင့် Professional Training Institute
link ကိုမှ ပေါ်တူဂီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ပေါ်တူဂီ၌လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်